Man Utd, Barcelona iyo Bayern oo ku biiray xiisaha Nicolas Pepe | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Man Utd, Barcelona iyo Bayern oo ku biiray xiisaha Nicolas Pepe
Man Utd, Barcelona iyo Bayern oo ku biiray xiisaha Nicolas Pepe
Posted by: Mahad Mohamed February 25, 2019
Himilo FM –Nicolas Pepe oo katirsan Lille ayaa ah mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka ku leh kubadda cagta Yurub waxaana xiiseynaya kooxaha ugu waaweyn kubadda cagta. Arsenal iyo Chelsea ayaa lala xiriirinayay bishii Janaayo laakiin haatan kooxo badan ayaa ku biiray doonistiisa.
TeleFoot ayaa soo warisay in illaa iyo haatan kooxo badan oo Yurub ah ay doonayaan inay lasoo saxiixdaan xagaagan. Wargeyska Faransiiska ayaa sheegaya in Bayern Munich, Barcelona, Manchester United iyo PSG ay sidoo kale kula biireen Arsenal iyo Chelsea doonista xiddiga.
Wargeyska ayaa sheegay in Lille ay raadineyso € 80 Milyan iyo wax ka sarreeya oo laga doonayo koox kasta oo xiiseneysa inay la saxiixato.
Pepe ayaa mucjiso ciyaareed ka sameeyay Ligue 1 xilli ciyaareedkan. Xiddiga heerka caalami ee Ivory Coast ayaa dhaliyay 16 gool, waxaana uu caawiyay 8 gool 16 kulan oo horyaalka Ligue 1 ah.
Xiddiga garabka ka ciyaara waxay Chelsea u aragtaa in uu beddel u noqon karo Willian iyo Pedro halka Bayern Munich ay dooneyso in uu beddelo Arjen Robben.
Manchester United ayaa had iyo jeer suuqa ugu jirta xiddig garab ah, halka Arsenal ay baadi goob ugu jirto Theo Walcott oo ku biiray Everton. Bacelona iyo PSG ayaa isha ku haya inay xoojiyaan garbahooda.
Previous: Khatarta “ Murugta lala qoslo” oo caafimaad ahaan laga digay!
Next: Xog ku saabsan xasuuqii Khojaly ee Armenia
Man United, Chelsea, iyo Tottenham oo ku hardamaya xiddig ka tirsan Brighton
Everton oo u dhaqaaqday soo qaadashada Samuel Umtiti
Juventus oo u dhaqaaqday soo qaadashada Olivier Giroud